Nibata fandresena i Madagasikara tamin’ny lalao faharoa natrehiny ao amin’ny Vondrona A misy azy amin’ny COSAFA Women 2019 tanterahina atsy Afrika Atsimo. Nandresy an’i Comores tamin’ny isa 5 noho 1 i Madagasikara androany. Voahosotra ho mpilalao mendrika sady nampidi-baolina roa (20', 51') nandritra ity fihaonana ity Rasoanandrasana Marie Sarah, mpilalaon’ny Barea. (Jereo Sary Tohiny)
Hiatrika lalao faharoa ao amin’ny Vondrona A misy azy i Madagasikara anio. Hifandona amin’i Comores ny ekipam-pirenena malagasy vehivavy amin’izany. Teo amin’ny lalao voalohany dia niondrika tamin’ny isa 0 noho 2 nanoloana an’i Malawi i Madagasikara. I Afrika Atsimo mpampiantrano ity COSAFA Cup 2019 ity no ekipa fahatelo hifandona amin’i Madagasikara rahampitso.